10ka Kubbad-dile Ee Ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Oo Lasoo Saaray Iyo N'Golo Kante Oo Shanta Boos Ee Sare Laga Waayey - Gool24.Net
10ka Kubbad-dile Ee Ugu Wanaagsan Kubadda Cagta Oo Lasoo Saaray Iyo N’Golo Kante Oo Shanta Boos Ee Sare Laga Waayey
Tobanka ciyaartoy ee khadka dhexe ee burburinta kubadda iyo joojinta kharaha kusoo socda shaqadoodu inta ugu badan tahay ayaa lasoo saaray, waxaana kaalinta koowaad kusoo baxay xiddiga Real Madrid ee Casemiro oo shantii sannadood ee ugu dambeeyey guulo badan la gaadhay kooxda reer Spain.
Laacibka boosaska badan ka ciyaara ee Joshua Kimmich oo laf-dhabar u ah Bayern Munich ayaa kaalinta labaad soo galay, waxaanu ka sarreeyaa Thomas Partey oo Atletico Madrid u ciyaara, isla markaana ay Arsenal iyo kooxo kale raadinayaan.
Ciyaartoyga ugu soo horreeya qiimaynta laacibiinta khadka dhexe ee difaac caawiyeyaasha ah, waxa Premier League ka noqday Fabinho oo qayb laxaad leh kasoo qaaday guulihii Liverpool ee xili ciyaareedyadii tegay, kaas oo isagana uu kasii dambeeyo Rodri oo Manchester City ka tirsan. Xiddiga Chelsea ee N’Golo Kante ayaa kaalinta lixaad soo galay.
Wargeyska Daily Star ee kasoo baxa UK oo soo bandhigayay qiimaynta ciyaartoyda boos walba, isla markaana tobanka xiddig ee ugu wanaagsan meel walba gaar usoo bandhigayay ayaa waxa uu maanta daabacay 10ka difaac dhexe.
Xiddiga Real Madrid ee Casemiro ayuu wargeysku sheegay in inkasta oo Sergio Ramos iyo Karim Benzema ay bogga hore ee warbaahinta haystaan, uu haddana muhiimad aan lasoo koobi karayn leeyahay Casemiro oo aanay la’aantii socon karin.
Laacibka reer Brazil ayaa xili ciyaareedkan qaab difaacis iyo kubbad dhisid cajiib ah sameeyey, waxaana uu kubbado badan ka joojiyey Sergio Ramos iyo Raphael Varane oo khataro ku geli lahaa.
37 ciyaarood oo horyaalka LaLiga ah, waxa kaliya oo Los Blancos laga dhaliyey 22 gool, waxaanu Casemiro siiyaa xasillooni iyo xorriyad ay ku sahqeeyaan Toni Kroos iyo Luka Modric.
Halkan kaga bogo 10ka ciyaartoy ee ugu wanaagsan khadka dhexe ee kubbad burburiyeyaasha ah:
9) Axel Witsel – Borussia Dortmund
8) Nemanja Matic – Manchester United
7) Sergio Busquets – Barcelona
6) N’Golo Kante – Chelsea
5) Rodri – Manchester City
4) Fabinho – Liverpool
3) Thomas Partey – Atletico Madrid
2) Joshua Kimmich – Bayern Munich
1) Casemiro – Real Madrid